စစ်ရှောင်ပြည်သူ သုံးသောင်းခွဲကျော်ကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ထုတ်ပေးပြီးဖြစ် - Yangon Media Group
IDP စခန်း ၁ဝဝ ကျော်ရှိ စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၃၅ဝဝဝ ကျော်ကို နိုင်ငံသားစိစစ် ရေး ကတ်များထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက IDP စခန်း ၈၉ ခု ၊ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့ရှိ IDP စခန်း ၂ဝ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ IDP စခန်းတို့မှ စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၃၅ဝဝဝ ကျော်၏ နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြား ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးခြင်းများကို မိတ္တူထုတ် ပေးခြင်း၊ အသစ်ပြန်လည် လျှောက် ထားခြင်းများကို လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ မေ ၉ ရက်က သိရသည်။
”တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိ တဲ့ IDP စခန်းတွေက တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေအတွက်လည်းပဲ သက် ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် တွေမှာရှိတဲ့ဦးစီးဌာနနဲ့ တိုင်းဒေသ ကြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ပူး ပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အထူး စီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ပြီးတော့ ဆောင် ရွက်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြစ်ကြီးနားက IDP စခန်းတွေက စစ် ရှောင်ပြည်သူအားလုံးနီးပါး ကျွန်တော် တို့ ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ကျန်နေတာတွေ ရှိတော့ရှိပါမယ်။ ဒါကိုလည်း ဆက် လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အလုပ်သမား လူ ဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် ပြည်သူများအမှန် တကယ်လိုအပ်နေသည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်နှင့်အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းကို လွယ်ကူလျင်မြန် စွာထုတ်ပေးရန်အတွက် အစိုးရသစ် စတင်တာဝန်ယူစဉ်ကတည်း က သစ္စာစီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ဆိုသည်။ ယင်းကြောင့်အစိုးရ၏ တတိယ တစ်နှစ်တာအတွင်း၌ ပြည်သူ ပေါင်း ၂၃၃၈၃၉၂ ဦးကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများထုတ် ပေးခဲ့သလို ဒေသအသီးသီးတွင် သာသနာ့နွယ်ဝင်စိစစ်ရေး ကတ် ပြားအဖြစ် သာမဏေ ၁၇၅၄၅ ပါး၊ ရဟန်းအပါး ၃၇၈၆ဝ ပါး၊ သီလရှင်အပါး ၆၈၃ဝ တို့ကိုလည်း စိစစ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
'ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို ဒီလို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာ ပထမဆုံး မြင်တွေ့
ထိုင်းသို့ အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သမား ၁၆ ဦး ပွဲစား အလိမ်ခံရ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို?
အရက်က ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို ဖျက်ဆီးနေသလဲ
ပြန်လည် စွန့်လွှတ်ထားသောမြေများ တောင်သူများထံ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အပြီးပြတ် ပေးအပ်နိုင်ရေး လုပ??